Archives des Ambohimanarina - Midi Madagasikara
Ambohimanarina : Jiolahy roa tratra teo am-pamakiana trano
Redaction Midi Madagasikara 13 mars 2014 Ambohimanarina, Jiolahy tratra
Mirongatra ny asan-jiolahy, tsy andro tsy alina fa dia miseho lany hatrany ny fandrobana sy vaky trano Tsy afaka nihetsika fa dia noraism-potsiny ireto olona roalahy namaky trano teny Ambatolampy Ambohimanarina. Ny loharanom-baovao no nahalalana fa tamin’io 9 ora omaly maraina no nanaovany izany. Tsy tao ny tompon-trano tamin’izay ary dia izany no nohararaotin’ireo mpangalatra.…
Ambohimanarina : Zaza roa samy telo taona, nisy nanondraka asidra
Redaction Midi Madagasikara 24 janvier 2014 Ambohimanarina, nanondraka asidra, Zaza
Potika ny tarehin’ilay zaza ary tsy maintsy hodidina izy Tamin’ny faha-30 novambra taona 2013 no niseho ny zavatra nampalahelo teny Ambohimanarina. Ankizy kely roa, lahy sy vavy, no nisy nanondraka asidra. Ny iray teo amin’ny tarehiny ary ny faharoa teo amin’ny tongony. Amin’izao fotoana izao, lehilahy antsoina ho G. no nosamborin’ny polisy avy ao amin’ny…
Ambohimanarina : Zaza 1 taona sy 4 volana nahatelina poizim-boalavo sy fanafody hafa
Redaction Midi Madagasikara 21 janvier 2014 Ambohimanarina, poizim-boalavo sy fanafody, Zaza nahatelina
Hatairana ny an’ny ray aman-drenin’ity zaza vavikely vao herintaona sy efabolana nahita azy narary tampoka, tamin’ny sabotsy alina teo teny Ambohimanarina. Novonjena nentina teny amin’ny hopitaly haingana. Rehefa nandray azy ny mpitsabo ka nijery ny fahavoazany dia nahita fa nahatelina poizim-boalavo sy fanafody hafa “gélule” ilay izy. Ny nahamaika dia ny nitsabo azy ary efa…
Ambohimanarina : Dimy lahy nanafika « grossiste », lasa ny vola rehetra
Redaction Midi Madagasikara 15 janvier 2014 Ambohimanarina, nanafika grossiste
Fanafihana maromaro no niseho teny an-toerana omaly hariva araka ny vaovao re teny an-toerana. Dimy raha ny resaka fantatra. Nirefotra ny basy. Omaly hariva tamin’ny 7 ora tany ho any, mpivarotra ambongadiny iray no notafihan’ny jiolahy tao ambadiky ny tsena Ambohimanarina. Ny loharanom-baovao no nahalalana fa dimy ireto mpandroba ireto ary samy nitondra basy avokoa.…
Ambohimanarina : Lehilahy lehibe hita faty tao an-tranony
Redaction Midi Madagasikara 3 janvier 2014 Ambohimanarina, hita faty
Tamin’ny alarobia alina no nahitan’ny olona fatin-dehilahy iray efa tena lehibe tokoa teny amin’ny faritra Ambohimanarina. Voalazan’ny vaovao fa mipetraka irery ity olona ity. Samy gaga ny olona rehefa maraina ny andro fa tsy mbola nivoha foana ny tranony. Zavatra tsy dia mba fahita izany. Tapaka ny hevitra fa hovahana ny trano. Samy gaga ny…